Apple ga - agbakwunye teknụzụ nyocha ihu na Macs | Esi m mac
Ụlọ Ignatius | | Mac kọmputa
Ọtụtụ ihe a na-ekwu n'oge na-adịbeghị anya banyere ohere nke iPhone 8 inwe ma ọ bụ na ịnweghị Touch ID. Nsogbu ndị ụlọ ọrụ ahụ na-eche ihu iji mejuputa ya n'okpuru ihuenyo yiri ka ọ mere ka ụlọ ọrụ ahụ chegharịa ọnọdụ ya ma ọ bụ wepụ ya kpamkpam. Onye nyocha ọ bụla kwadoro ihe dị iche. Ọ bụrụ na Apple mechara wepụ ya, ihe m nwere obi abụọ, Ọ ga - ejikọ usoro nnabata ihu nke ga - eme ka ị mata onye nwe ya ma mepee iPhone. Ọfọn, ọ dị ka teknụzụ a ga-erukwa Macs, dịka nkọwa nke patent ọhụrụ achọpụtarala.
Uru nke ihe mmetụta nke na-amata ihu anyị na iPhone siri ike ikwenye ma sie ike iji, belụsọ ma kpọghee iPhone anyị ga-edebe ya dịka a ga - asị na anyị ga - ewere selfie. Agbanyeghị, na Mac ọ na - eme uche niile n'ụwa ma kwe ka ị gbakwunye ụgwọ nchekwa na-adịghị njọ ma ọlị. Dị ka Patently Apple si kwuo, nkà na ụzụ a nwere ike iru Macs nke na site na ihe dị iche iche, nwee ike ịkpọghe nnweta ya. Ọrụ a ga-adị mma mgbe ngwaọrụ ahụ na-ehi ụra ma anyị chọrọ iji ya ọzọ na-enweghị pịnye okwuntughe, weta Apple Watch nso ma ọ bụ pịa na Touch ID.
Tụkwasị na nke ahụ, ọrụ ya nwere ike ịdị ka nke ID Touch nke MacBook Pro, nke dabere na ndị ọrụ na-pịa akara mkpịsị aka, a na-emeghe otu akaụntụ ma ọ bụ ọzọ. N'okwu a, otu ihe ahụ ga - eme, mgbe ị na - agbanye Mac ọ ga - achọpụta ihu onye ọrụ wee mepee nnọkọ ahụ na akpaghị aka. Usoro njirimara a bu yiri nke Microsoft jiri na ụdị Mkpa kachasị ọhụrụ ọ wuru na Windows Hello nche nhọrọ. Usoro a na-eji igwefoto Intel Real Sense nke na-achọpụta akụkụ atọ iji zere inwe ike ịmepe ohere na foto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Apple ka ịgbakwunye ihu ude technology ka Macs
N'ihi iFixit anyị nwere ike ịgbanwe batrị nke MacBook Pro Retina anyị ugbu a